*Speak from My Heart*: March 2011
ပြီးခဲ့သော ဆောင်ကုန်ပိုင်းလောက်က ထူးထူးဆန်းဆန်း အညိုရောင်ရှိသော နှင်းပွင့် နှင်းခဲ နှင့် နှင်းဖတ်တို့ ကျဆင်းခဲ့တယ် ဆိုပဲ။ ဘယ်မှာပါလိမ့် .... ... ...
အား အညိုရောင် နှင်းမှုံတွေနှယ် ကောဇောခင်းထားသလိုပါပဲလား ။
အမယ် အဖြူရောင် နှင်းဖတ်တွေထဲမှာ သူက ပြုံးပြနေပါလား။
ဒါကတော့ အညိုရောင် နှင်းအစိုင်အခဲ တွေလားလို့ 
သြော် ခွေးနှင့် မြင်းတွေ နှင်းနဲ့ ဆော့နေတာကိုး ။
ဟာ နှင်းတွေလည်း ဟုပ်တော့ဘူး။ ကြောင်ဖူဖူလေးတွေကြားထဲက ကြောင်ညိုလေးပါ့လား . .. ...၊ ကြောင်လေးတွေက ချစ်စရာလေးတွေ
မျက်လုံပြာနှင့် ကြောင်လေးလည်းပါသေး . .. ...
နောက်ဆုံကတော့ ..... ..... .....
အားလုံး ပျော်ရွှင်စရာ ဧပြီလလေး ဖြစ်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။ မြန်မာ့ ခါသင်္ကြန် နှင့် နှစ်သစ်ကူးတို့ လည်း မကြာခင်ကာလမှာ ရောက်ရှိလာတော့မှာ မဟုပ်ပါလားရှင်။
ပုံများအားလုံး Google Search မှ ရှာဖွေထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။
Posted by စော(အဝါရောင်မြေ) at 10:18 PM
ပုဂံ မြို့ သို့တစ်ခေါက်ရောက်ခြင်း - ၂
ပုဂံမှ ဘုရားများကို ငယ်ငယ်က ( အထူးသဖြင့် GTI ကျောင်းသားဘဝကပါ) ဓါတ်ပုံ ရိုက်လိုပေမယ့် ကျမတို့ တွေ အတွက်တော့ ကင်မရာမရှိခဲ့လို့ မလွယ်ခဲ့ပါဘူး။ ခုလဲ အဖြစ်သာ ရိုက်လိုရတဲ့ ကင်မရာနဲ့တတ်နိုင် သလောက်သာ ရိုက်ကူးခဲ့တာပါ။ ကျမအနေနဲ့ ကတော့ ပုဂံ ဘုရားရဲ့တည်ဆောက်ရေးပညာ ပိုင်းတွေကို ဆရာ၊ ဆရာမတွေ ရှင်းပြတဲ့ အချိန်က စလို့ သာ သတိထားခဲ့မိတာပါ။ ပုဂံ ငလျှင်လှုတ်တုံးကလည်း အတော်လေး ပျက်ဆီးခဲ့တယ် လို့ငယ်ငယ်က ကြားခဲ့ဘူးပါတယ်။ ကျမ မှတ်မိတဲ့ အရွယ် မဟုပ်ပါဘူး။
ဒီတစ်ခေါက် ပြန်တော့ လည်း တချို့ နေရာတော်တော် များများ ပြောင်းလဲနေပါတယ်။ ရှေးဟောင်း ပစ္စည်းခိုးသူတွေကြောင့် တချို့ ဆို ယခင်နေရာကနေ အတွင်းကို ပြောင်းရွေ့ ထားတာတွေကြောင့်ပါ။ ခုဆိုရင် တစ်ချို့အမွေအနှစ်တွေ မရှိတော့ သလောက်ပါပဲ။ ကျမတို့အနေနဲ့တစ်ပိုင်တစ်နိုင်တတ်နိုင်တာဆိုလို့ဘုရားနံရံတွေမှာ တွယ်ကပ်နေတဲ့ အပင်ငယ်တွေကို ဂရုစိုက် နုတ်ဖယ်တာပဲ လုပ်ပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
အရင်က ဘုရားတစ်ဆူနှင့် တစ်ဆူကြား ကြက်မ တစ်ဝပ်စာပဲ ခြားပါသတဲ့။
(ဒီနေရာမှာ comment မှာ စာများကို ဖတ်ကြည့်စေလိုပါတယ်။ ကိုကြီးကျောက်ရဲ့ဝေဖန်ပေးတာကိုလဲ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။)
ထုမှာ ဓမရံ လို့ပြောကြပါတယ်။
ထုထည်ကြီးမားတဲ့ ဘုရားတွေပဲ များသောအားဖြစ် တွေ့ မြင်ဖူးမျှော်ရပါတော့တယ်။
နုမှာ အာနန္ဒာ တဲ့ အနုပညာ လက်ရာတွေမှာတော် အာနန္ဒာ ဘုရားက အလှဆုံးလို့ ဆိုပါတယ်။
ဘုရားထဲမှာ ဘုရားပတ်လမ်း (၂) လမ်းရှိပါတယ်။
၁။ ဘုရားနဲ့အနီးဆုံးက မင်းလမ်း၊ မင်းနှင့် မှူးမတ် ဗိုလ်ပါတွေ ဘုရားပတ်တဲ့ လမ်းပါ။
၂။ အပြင်ပတ်လမ်းက ပြည်သူတွေ ပတ်တဲ့လမ်း
ဒီနတ်သားက တော့ အတွင်းကို အမျိုးသမီးတွေ မဝင်ဘို့ တားမြစ်တယ်လို့ ဆိုပြန်ပါတယ်။ (အတွင်းပတ်လမ်းကို ဆိုလိုပါတယ်)
အာနန္ဒာဘုရားဟာ မုတ်ဦး (၄)ခု ရှိပါတယ်။ ကျန်စစ်သားမင်းသည် ပန်ရံဆရာ (၄) ယောက်ကို တစ်ဖက်နှင့် တစ်ဖက်ကြား ကာရံပြီး ဆောက်လုပ်စေပါတယ်။ ဆောက်လုပ်ပြီးတဲ့ အခါမှာ ပန်ရံဆရာ(၄) ဦး တိုင်းပင်ဆွေးနွေးခြင်း မရှိပဲ ဆောက်လုပ်ထားသော မုတ်လေးမုတ်သည် တစ်ပုံစံတည်းဖြစ်နေပါတယ်။
ကျမသွားသောအချိန်က အာနန္ဒာဘုရားပွဲးကျင်းပနေချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ ဘုရားတည်ပုံမှာ အပေါင်းလက္ခဏာပုံ ရှိသော်လည်း ကျမ မုတ်နှစ်ခုပေါ်အောင် ပုံမရိုက်ခဲ့ရပါဘူး။
တံခါကတော့ တဖက်မှာ နှစ်ရွတ်တပ်ထားပြီ ဗိုလ်ခြေတစ်ထောင်အားနှင့် ဖွင့်မှပွင့်တယ်လို ဆိုပါတယ်။ ကျန်စစ်သားမင်းရဲ့ ကောင်းမှူတော် ဖြစ်ပြီ၊ ကျန်စစ်သားမင်းကြီး အဓိဌန်ဖြင့် တရားထိုင်က အလိုလိုပိတ်ပြီး၊ တရားထိုင်ရာကထပါက တံခါးတို့ သူဘာသာပြန်ပွင့်တယ်ဆိုပါတယ်။
ဘုရားလေးဆူရှိပါတယ်။ နှစ်ဆူက ရှေးဘုရားဖြစ်ပြီ၊ ကျန်နှစ်ဆူက အင်းဝခောတ် လက်ရာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ (လေးပုံလုံး ရှိပေမယ့် နိုင်းယှဉ်ကြည့်နိုင်ရုံ နှစ်ဆူပတဲတင်ပေးထားပါတယ်။)
ပုံမှာပြထားသော ဘုရားနှစ်ဆူမှာလဲ ဒူးဆစ်ပါသောဘုရားက ပုဂံလက်ရာပါ။
ဒူးဆစ်မပါတဲ့ ဘုရားက အင်းဝခေတ်က ပြန်လည် ပြုပြင်ထားရသော ဘုရားပါ။ မယ်သီလရှင် တစ်ဦး ခြေဖမိုးပေါ်ဖယောင်တိုင် တင်လှူရာမှ မီးလောင်ကျွမ်းသွားလို့ ပါလို မှတ်သားရဘူးပါတယ်။
Posted by စော(အဝါရောင်မြေ) at 2:41 AM
ပုဂံ မြို့ သို့တစ်ခေါက်ရောက်ခြင်း - ၁
ကျမတို့ငယ်ငယ်က ပုဂံကို သွားမယ်ဆိုရင် ကျောက်ပန်တောင်း-ညောင်ဦီးကားလမ်းကနေ သွားရတယ်။ လွန်ခဲ့ တဲ့ ၁၀ နှစ်ကမှ ဂွေးချို-ချောက်-ပုဂံ ကားလမ်း(ကတ္တာရာလမ်း) ပေါက်ပါတယ်။ နောက် ဗျတ္တ ပန်းဆက်လမ်း ဆိုပြီး ပုဂံ-ညောင်ဦးကနေ ပုပ္ပါးကို တိုက်ရိုက်သွားတဲ့ ကားလမ်းလဲ ဆက်လက်
ဖောက်လုပ်တာမို့ရန်ကုန်မှ အထက်ဘက်သို့ယခင်က မကွေး၊ ရွှေစက်တော်၊ ပုဂံ-ညောင်ဦး၊ ပုပ္ပါး ခရီးစဉ်တွေ အတွက် ပိုလမ်းတိုသွားပါတယ်။
ကျမတို့အတွက်တော့ ပုဂံဟာ ဝါလွင်တောက်ပတဲ့ ပုံပြင်တွေ၊ ဘုရားတွေ၊ သမိုင်းတွေနှင့် ပြည့်နေသော နေရာလေး တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်ဆိုရင်တော့ ပုဂံနှင့် ညောင်ဦးမြို့ မှ ကလေးတွေဟာလည်း ဘုရားသမိုင်း ပြောပြခဲ့ဘူးသူတွေ တော်တော်များများ ရှိခဲ့ပါပြီ။
ဒါကတော့ ပုဂံမြို့ က ယွန်းထည်ဆိုင် တစ်ဆိုင်ပါနော်။ လက်ဆောင်ပေးဖို့ဝယ်ရင်း ပုံလေးရိုက်လာလို့တင်ပေးတာပါ။
ပထမဆုံးကတော့ ဓမ္မရာဇက ဘုရားကို အရင်ဝင်ဖူး ခဲ့ပါတယ်။
ဒါက ဓမရံကြီး ဘူရားပါ။
အနော်ရထားမင်းရဲ့ကောင်းမှူတော်ဖြစ်တဲ့
ပုဂံသားတွေရဲ့စာဆိုကတော့ တန်ခိုးမှာ ရွှေစည်ခုံရယ်လို့စပ်ဆိုကြပါတယ်။
အံဖွယ် (၉)ပါးရှိတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။(မမှတ်မိတော့လို့သိသူများရှိက ပြောပြကြပါ ၊ အိမ်ကို မေးပြီးပါပြီ။ )
အားလုံး မှန်၊ မမှန်တော့ မသိတော့ဘူး။ မှတ်မိသလောက် ရေးရရင်တော့
၁။ လူတရစ်၊ နတ်တရစ်တည်သော ဘုရားဖြစ်ခြင်း
၂။ အာရုံဆွမ်း အဦးမရခြင်(နတ်တို့ က လှူဒါန်းတယ် လို့ဆိုပါတယ်)
၃။ ဘုရားအရိပ်သည် ရင်ပြင်ပေါ်မကျခြင်း
၄။ မိုးရွာလျှင် ဘုရားရင်ပြင်ပေါ်၌ ရေတင် မကျန်၊ ဘုရားအတွင်းမှ ရေသည်လည်း တံတိုင်းအပြင်သို့ လည်း မထွက်
၅။ တစ်နှစ်ပတ်လုံးပွှင့်သော ခရေပင်ရှိခြင်း
၆။ ဘုရားဝန်းအတွင်းမှ အသံသည် အပြင်(တံတိုင်းအပြင်) သို့မထွက်ခြင်း၊
၇။တံတိုင်းအပြင်မှ အသံသည်လည်း ဘုရားဝန်းအတွင်းသို့မဝင်နိုင်ခြင်း
၈။ ဘုရားပွဲး၌ လာသမျှသောလူ ဝင်ဆန့် ခြင်း
၉။ ရွှေစည်းခုံ ဘုရားလုံးပတ်တော်တိုင်းသော ကြိုးသည် လုံပတ်တော်တူသော ရွှေတိဂုံဘုရား၌ ပတ်လျှင် ကြိုးစ မမှီး၊ ထို အတူ ရွှေတိဂုံဘုရားမှ လုံးပတ်တော်တိုင်းသော ကြိုးကို ရွှေစည်းခုံ ဘုရား၌ တိုင်းပါကလည်း ကြိုးမပတ်မိခြေ။ လုံးပတ်တော် ပမာဏခြင်းမှာ တူတူပင် ဖြစ်ပါသည်။
ကျမ မှတ်မိသလောက်ပါ။ (မှားနေတာ၊ တစ်စုံတစ်ရာ ချွတ်ချော်မှူရှိခဲ့ရင် အသိပေးနိုင်ပါတယ်။)
ဒါက ဘုရားရှေ့ က အာရုံခံ တန်ဆောင်းပုံ
ဆွမ်းမဦးတဲ့ သပိတ်က ဒီသပိတ်တွေထဲက တစ်လုံပါ။ သပိတ်တွေက ရိုက်တဲ့ အထဲ အကုန်မမိဘူး။
ပန်းတင်ခုံလို့ခေါ်သလား မသိဘူး။ :D
နောက်ဆုံးပုံ နှစ်ပုံကတော့ ကျန်စစ်သားမင်း မင်းပြစ်သင့်လို့ထွက်ပြေးခါနီး ဘုရားကို လားဖူးတုံးကကျန်ခဲ့တဲ့ အမှတ်အသားတွေပါ။ တစ်ခုက မြင်းခွာရာ၊ မြင်းနှင့် ထွက်ပြေရတုံးကပါ။ နောက်တစ်ခုကတော့ အရိတ္တမာလှံရာပါ။
( ချိုင့်လေးထဲကို ရေထည့်ကြည့်ရင်ဘုရားထီးတော်ကို ဖူးမျှော်နိုင်ပါတယ်။ နေပူနေရင်တော့ အရိပ်ပဲ ဖူးရတတ်ပါတယ်)
ဘုရားပုံကများနေတယ် ။ အားရပါးရတင်ခြင်တယ်။ ဒါကြောင့်မို့ခွဲးပြီတင်ပေးမယ်နော်။
Posted by စော(အဝါရောင်မြေ) at 12:31 AM
တာလေးမြို့ နယ် ငလျှင်လှုတ်ပြီးပုံ
ငလျှင်လှုတ်ပြီး တွေ့ ရသော တာလေးမြို့ နယ်ပုံတွေပါ။ ကျမတင်ထားတာ Forward Mail ကပါ။
http://akm-kuntha.blogspot.com/2011/03/blog-post_2303.html ဒီ Site က ယူပြီး ပို့ တာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ တဆိတ် အဲဒီ Link ကနေ ကြည့်လိုက်ပါနော်။
အသိမှ ပေးပို့ သည်ကို တဆင့် ပြန်လည်ဖော်ပြပါသည်။
Posted by စော(အဝါရောင်မြေ) at 4:26 AM
ကျမ မြန်မာပြည်က ငလျှင်အကြောင်းသိချင်တာနှင့် အင်တာနက်ကနေ ရှာလိုက်တာ http://blogs.cfr.org/asia/2011/03/24/earthquake-in-burma/ ဒီထဲကနေပြီ ဒီလိုရေးထားတာကို ဝမ်းနည်းစရာတွေ့ ရပါတယ်။
The USGS reported earlier today thatastrong, 7.0 magnitude earthquake hit northeastern Burma Thursday evening Burmese time. There are few, sketchy reports of damage, but it will be interesting to watch and compare the response to Japan. The Burmese government is not, shall we say, very interested in transparency, and after Cyclone Nargis in 2008, which killed over 130,000 people, the government hid the scope of the disaster, purposefully slowed down relief efforts, and, after some time, tossed out international aid groups. A similar response to this earthquake could ensure major tragedy.
ကျမနဲ့သိတဲ့သူတွေကို မေးကြည့်တာ ရန်ကုန်မှာလဲ အထပ်မြင့်မှာနေတဲ့သူတွေပဲသိကြတဲ့ အကြောင်း။ အထပ်နိမ်သမားတွေကတော့ လှုတ်တာတောင်းမသိလိုက်ကြပါဘူးတဲ့။
နေပြည်တော်မှာလဲ ရုံးတွေဘာမှ ဖြစ်ပုံမရပေမယ့်၊ မြေညီတည်းခိုခန်းမှာ နေသူတွေကတော့ ကြောက်ရွံ့တုန်လှုတ်ကြကြောင်းပဲ သိရပါတယ်။ ကိုယ်တိုင်သွားမကြည့်နိုင်လို တခြားဆုံးရုံးမှုတော့ မသိပါဘူး။ မြန်မာပြည်မှာ ကျေညာခြင်းမရှိဘူးလို့ လဲပြောတယ်။ ရေဒီယိုကလဲ နားထောင်တဲ့သူနည်းလာလို့ကြေညာတယ်လို သိနိုင်မယ် မထင်မိပါဘူး။
Posted by စော(အဝါရောင်မြေ) at 2:18 AM
အကွဲး အရှ ပုံပြင်တစ်ခု
ပြီးခဲ့တဲ့ အပတ်ထဲက အလုပ်တူလုပ်ခဲ့သော သူငယ်ချင်းများနှင့် တွေ့ ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဟိုအကြောင်း ဒီအကြောင်းပြောရင်းကနေ အတူလုပ်ခဲ့စဉ်က ကြုံတွေ့ ရဘူးသော အမျိုးသမီး အကြောင်းကြားခဲ့ရပါတယ်။
ကျမတို့ တွေတွေ့ ရတုံးကတော့ သူက စင်ပေါ်ကလူပါ။ ခုကြားလိုက်ရတော့ စင်အောက်ရောက်သွားပြီ . . .။ ကြားလိုက်ရတာကိုပဲ သူမ မကောင်းခဲ့သော်ညားလဲ မိန်းခလေးခြင် ကိုယ်ခြင်းစာစိတ် ကလေးနှင့် စိတ်မကောင်းဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။
ဇာတ်လမ်းကလေးကတော့ ကျမအလုပ်လုပ်ခဲ့ဘူးသော တစ်ခုသော ကုမ္ပဏီမှာ အလုပ်လုပ်စဉ်က ထို အမျိုးသမီးသည် ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ရဲ့ဟိုဘက်၊ ဒီဘက်အမျိုး တစ်ယောက်ပါ။ ဒီအမျိုးသမီးရဲ့ ယောင်္ကျားက လူကြီးတွေနှင့် အဝင် အထွက် ရှိပြီး လုပ်ကိုင်နေတဲ့သူတစ်ယောက်ပေါ့။ ပြီးတော့လဲ လက်ကိုင်ဖုန်းတွေကို သူ့ ရုံးက ဝန်ထမ်းပေါင်းစုံရဲ့ နံမည်နှင့် ထုတ်ပြီလဲ ရောင်းတတ်ပါသေးတယ်။ သူလည်သလို လုပ်ကိုင်စားတတ်တာကို ပြောပြတာပါ။ ဘယ်သူဆီ ဝင်ပြီး၊ ဘယ်လို လုပ်တယ်ဆိုတာတော့ မသိပါဘူး။
ဒါပေမယ့် သူမ အမျိုးသားက ကျမတို့ ရုံးအတွက်လဲ တခါတရံ ကူညီပေးပြီး ဝင်ထွက် သွား၊လာနေတဲ့ တာဝန်ခံ သူဌေးလို အဆင့်မျိုးပေါ့ရှင်။ အဲဒီလူကတော့ ပျော်စရာတွေတော့ ပြောတတ်ပါတယ်၊ သူနှင့်လည်း တိုက်ရိုက် မပတ်သတ်လို့ကျမတို့ ရုံးကလူတွေနှင့် တော့ ခပ်ကင်းကင်းနေလို့ ရတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့ရှင်။ ဒါပေမယ့် နေလို့ ရပေမယ့်ပေါ့နော် အဲဒီအမျိုးသမီး နှင့် တွေ့ လိုက်ရလို့ ကတော့ တစ်ခုခုတော့ စိတ်အနောက်အယှက်ဖြစ် ရတော့တာပေါ့။
သူမနှင့် သူမအိမ်ထောင်ဖက်တို့ယူကြစဉ်ကတော့ ချစ်ကြသလား၊ ပျော်ရွှင်စရာကောင်းခဲ့လား မသိပါ။ ကျမတို့ နှင့် တွေ့ ရသော အချိန်တွင် သူမဧ။် အိမ်ထောင်စုတွင် သားတစ်ယောက်နှင့် သမီးတစ်ယောက်ပင် ထွန်းကာနေပြီ။ သူမသားက ၅တန်းလောက်ရှိနေပြီ၊ သမီးကလဲ ၂တန်းလောက်တော့ ရောက်နေပါပြီ။ သူမ အမျိုးသားမှာ ကုပ္မဏီ သေးသေးလေးနှင့် အိမ်တွေ၊ ကားတွေ ပိုင်ဆိုင်နေပြီ။
အဲလိုပဲ သူမကလည်း မယားကြီးအဖြစ် ရာထူးတက်နေလေပြီ။ မိမိယောင်္ကျား နောက်မိန်းမ ရှာခြင်သည်ကို မည်သည့် အိမ်ထောင်ရှင်မမှ ခံစားနိုင်မည် မဟုပ်ပါ။ ထိုကြောင့်ပင်လားတော့ မသိ။ သူမသည် ယောင်္ကျားနှင့် စကားပြောရာတွင် မချိုသာတော့ပါ။ ကြမ်းတမ်းပါသည်။ ထိုနောက် သူမအမျိုးသားရဲ့ဝန်ထမ်းတွေကို အိမ်ဖော်ခေါ်ထားသလို ဆက်ဆံသည်။ ဒီနေရာမှာတော့ သူမနှင့် သူမအမျိုးသားတို့သဘောထား သိပ်မကွာခြားလှဘူး ထင်ပါသည်။ ဝန်ထမ်းသည် ရုံးကိစ္စသာ လုပ်ပေးရန် ဝတ္တရားရှိပါသည်။ တချို့ သော အလုပ်ရှင်တို့ သည် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာနှင့် ရုံးကိစ္စကို ဘယ်လို ခွဲးခြားလုပ်ကိုင်ရသည်ဟု မသိလို့ ပဲလား၊ မဖြစ်နိုင်ပါ။ တမင်သက်သက် အခွင့်အရေးယူခြင်းလို့ ပဲ ကျမတော့ ယူဆပါသည်။
ပထမအကြိမ် စတွေ့ ရသော ပြသနာမှာ ကျမတို့အလုပ်စဝင်မှ ကျမတို့ ကုပ္မဏီက စဖွင့်တာဆိုတော့ ကာ မြန်မာ ဗုဓဘာသာဝင်တို့ ရဲ့ ထုံးစံနှင့်အညီ ကုပ္မဏီဖွင့်ပွဲး စလုပ်ပါတယ်။ ကျမတို့ဝန်းထမ်းတွေလဲ လုပ်တတ်သလောက်တော့ ကူကြပါတယ်။ ပြီတော့လဲ တရားနား ဘုန်းကြီပွဲပြင်နှင့်ပေါ့လေ။ ဘုန်းကြီးကြွတော့မှ ဝန်ထမ်းတွေက စားကြတာပါပဲ။ သူတို့ ဝိုင်း၊ ကိုယ်စားမဲ့ဝိုင်း ပြင်ကြပြီး စားတော့ စလာပါတယ်။ စားသောက်တာကို များတယ်၊နည်းတယ် သူတို့ ပြီမှ စားစေခြင်တဲ့ သဘောဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်။ အဟင်း အားလုံးကလဲ ကိုယ်မာနလေးနှင့်ပေါ့လေ။ ဘာမှလဲ အမှားမလုတ်ထားတော့ ခပ်တည်တည်ပါပဲ မလုပ်ကြပါဘူး၊
ဒုတိယအကြိမ်ကတော့ တစ်နေ့ တော့ သူမတို့ အိမ်၌ အလှူလုပ်ပါသည်။ ကျမတို့ ရုံးကလူတွေလဲ လာခဲ့ဖို့ ဖိတ်ပါတယ်။ ကျမတို့ ရောက်တော့ ဧည့်သည်ဆိုတော့ စားဖို့ ထိုင်ပဲစောင့်တာပေါ့။ သူမရုံးကမှ မဟုပ်တာ အိမ်ထဲဝင်ပြီ ဘယ်သူက သွားယူစားပါ့မလဲနော်။ သူမ ဘာပြောတယ်ထင်ပါသလဲ။ သူမပြောတာက `ဟင် ဘယ်သူမှလဲ ဘာမှမလုပ်ကြသေးဘူး၊ ထိုင်နေကြတယ်` ။ အော် ဖြစ်မှဖြစ်ရလေ။ ဒါပေမယ့် သူမအမျိုးသားကတော့ ကျမတို့ ကုပ္မဏီကလူတွေနှင့် ပတ်သတ်လို့ဘယ်လိုကြောင့်တော့မသိ ထိုင်နေခိုင်းပါတယ်။
သူ့ အမျိုးသမီး(သူမ) ကို ဘယ်သူ၊ဘယ်ဝါတွေရှိလားနှင့် မေးလိုက်ပါတယ်။ သူမကလည်း ခပ်ကြမ်းကြမ်းပဲ ဘယ်သူမဆို သူတို့ အတွက်ပဲလုပ်ရမယ်။ ကျမတို့ က သူ့ ဝန်ထမ်းတွေ လုပ်ပေးရမယ့် အဆင့်မျိုး(သူတို့ နှင့် အဆင့်မတူတဲ့ သဘောပေါ့ရှင်)။ ကျမတို့ ရှေ့ မှာ အမျိုးသားကို ပြန်ပက်လိုက်တော့ သူ့ အမျိုးသားလည်း သိက္ခာကျတာပေါ့။ အမျိုးသားကလဲ အရေထူနေသလား မသိပါ ရယ်ကျဲကျဲလုပ်နေပါတယ်။ ကိုယ်တွေလဲ ဘယ်ကောင်းပါ့ မလဲ။ အမှန်ဆို သူ့ အိမ်တွင်းရေးကို အတွင်းမှာသာ ဖြေရှင်းသင့်ပါတယ်။
အဲလိုဖြစ်တော့ အားလုံးပဲ ကိုယ်စားရမှာ ပြေးယူရမလိုလို ပေါ့နော်… :D။ အဲဒါနှင့် ကျမတို့ ရုံက မန်နေဂျာရော ရုံးကလူတွေရော ထတဲ့သူထ၊ သွားယူတဲ့သူကသွားပေါ့။ အဲဒီတော့မှ အထဲမှာ ကူပြီးလုပ်ပေးနေတဲ့ သူတွေက ပြင်ပေး၊ လာချပေးနှင့် ကိစ္စပြီးသွားပါတယ်။ ကျမတို့အတွက်က မစားရလဲ ကိစ္စမရှိပါဘူး၊ သူကလဲ ကျမတို့ ရုံးကလူတွေ သူ့ မဖားလို့ မကြည်ဘူးထင်ပါရဲ။
နောက်တော့ သိပ်မတွေ့ ရတော့ပါ။ ကျမတို့ လဲ ကိုယ်ရုံးမှာပဲ အလုပ်လုပ်ပြီ၊ သူမကိုလဲ သူမအမျိုးသားက ရုံးခေါ်မလာပါ။ ဒါကြောင့် ကျမတို့ နှင့် ဘာမှ ပြသနာ ထပ်ဖြစ်စရာ မရှိတော့ပါ။ အဲဒီမှာလုပ်ပြီး (၈)လလောက်မှာ ကျမလဲ အလုပ်ထွက်ဖို့အကြောင်းကိစ္စကလေး ပေါ်လာတာနှင့် ထွက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ၂၀၀၇ ခုနှစ်လောက်ကဆိုတော့ (၄)နှစ်လောက်တောင် ရှိနေပါပြီ။ ဒီအတွင်း သူတို့ တွေ ဘာတွေဖြစ်နေမှန်း ကျမလဲ မသိတော့ပါ။ ကိုယ်လဲ ကိုယ်ဘဝနှင့်ကိုယ် လုပ်ရှားသွားလာနေခဲ့ ရတာပေါ့လေ။
ပြီးခဲ့တဲ့ အပတ်ကမှ မတွေ့ ရတာကြာပြီဖြစ်လို ကိစ္စတစ်ခုနှင့် အဲဒီမှာတုံးက အလုပ်တူတူ လုပ်ခဲ့ကြတဲ့ လူတွေ ပြန်ဆုံးကြပါတယ်။ မတွေ့ တာကြာတော့ ဟိုအကြောင်းပြောလိုက်၊ ဒီအကြောင်းပြောလိုက်နဲ့ ပါပဲ။ သူတို့ လဲ သူတို့ အလုပ်တွေက ဘယ်လို၊ ညာလို။ ပြီးခဲ့တဲ့ ဘယ်အလုပ်ကတော့ ဘာဖြစ်လို၊ ညာကြောင့်ပြောင်းဖြစ်တာ တို့ ပေါ့ရှင် …. …. …. အဟင်း ဟင်း ရှင်းတယ်မို့ လား။ ဟာတစ်ယောက်ကလည် ဘာလို့နောက်ကျသွားတယ်ပေါ့လေ။
အဲလိုနဲ့ ပြန်ခါနီတော့ စကားက သူမအကြောင်း ရောက်သွားပါတယ်။ အဟီး ကိုယ့် အကြောင်းတွေ ကုန်တော့ သူများအကြောင်း အဲလေ စကားစပ်သွားလို့ ပါ။ ဟယ် အဲဒီလူ ရဲ့အမျိုးသမီးလေ၊ ဟိုအမျိုးသမီးပေါ့ ဆိုပြီပြောပြမှပဲ သိလိုက်ရပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ တစ်နှစ်ကျော်လောက်က (အချိန်သေခြာသိဘူး) သူမက သူ့ အိမ်ထောင်ဖက်အမျိုးသားရဲ့ လုပ်ရပ်တွေကို သည်းမခံနိုင်တော့ ဘူးထင်ပါရဲ့ ။ သူမ က ဘာကြောင့် ဒီလိုလုပ်သလဲ။ သူမယောက်င်္ကျားကို ရွဲ့ ခြင်လို့ လို သူများတွေကတော့ အလွယ်တွေးနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ် သူမက သူမစိတ်မှာ အမှန်လိုအပ်သော မေတ္တာ ၊ အထူးသဖြင့် သူမခင်ပွန်းက တစ်ခြား အမျိုးသမီးပေါ်မှာ ပုံပေးထားသော သူမရသင့်တဲ့ နွေးထွေးတဲ့ မေတ္တာအကြင်နာကို အစားထိုးဘို့ထွက်ပေါက်ရှာတာလဲ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ သူမ တစ်ခြား ယောင်္ကျားတစ်ယောက်နှင့် တွဲးပါတယ်။
အိမ်ထောင်ရှင် အမျိုးသမီးတစ်ယောက်အဖြစ် ပထမအမှားဟာ ယောင်္ကျားကအပြစ် မရှာနိုင်ဘူး။ ဒါပေမယ့် သူမ ပတ်ဝန်ကျင်နှင့် သူမ အတွက်တော့ စိတ်ပျက်စရာအတိ။ အဲဒါက ငြူစူဆောင်းမြောင်း၊ ရန်ထောင်တာပါ။ ဒုတိယအမှားကတော့ နောက်ယောင်္ကျားနှင့် တွဲခြင်းပါ။ ဒါကတော့ ကိုယ်ကိုတိုင် အမှားလုပ်နေတဲ့ ယောင်္ကျားတစ်ယောက်ရဲ့ ရှေ့ မှာ အမှားကျူးလွန်းလျှက်သား ဖြစ်သွားပါတယ်။
သူမရဲ့ အမျိုးသားလူလည်ကျပုံကတော့ ဒီသတင်းသိပြီး အမျိုးသမီးနှင့် နောက်ဘဲကို အမိဖမ်းပြီး အကျပ်ကိုင်ပါတော့တယ်။ လူကြီးတွေလဲ ပါလိမ့်မည်ထင်ပါတယ်။ အရှက်လဲ တော်တော်ကွဲလိုက်မယ့် ဖြစ်ခြင်း။ ကလေးတွေ ရှိပေမယ့် ယောင်္ကျားက သူ့ မိန်းမကို စိတ်ကုန်ပြီး သည်ညည်း မခံနိုင်သော ကြောင့်လာ? နောက်မိန်းမကို အိမ်ပေါ်မှာ ပေါ်တင် ခေါ်တင်ပြီး ရွှေလက်တွဲးခြင်တာကြောင့်လာ ? လူကြီးတွေနှင့် အမိဖမ်းပြီး အိမ်ထောင်ရေး ဖောက်ပြန်လို့ တဲ့ လင်း၊မယား ပိုင်ဆိုင်မှုကို တပြား၊ တချပ်မှ ခွဲးမပေးနိုင်ပါဘူး။ ပြီတော့ ဒီမိန်းမကိုလည်း ဆက်မပေါင်းနိုင်ပါကြောင်း ဆိုပြီး တပြားမှ မပေးပဲ အတင်းလက်မှတ်ထိုး ကွဲးခိုင်းလိုက်ပါတယ်။
အမျိုးသမီးမှာလဲ အဝတ်တစ်ထည်၊ ကိုယ်တစ်ခုနှင့် အိမ်ပေါ်မှ ဆင်းလာခဲ့ရပါတယ်။ ခုတော့ သူမဟာ အဝတ်အစား၊ အနေအထိုင် ဆင်းရဲနေပါတယ်တဲ့။ အဲဒီ အိမ်ထောင်ကွဲးမှုကြောင့် သူမကတော့ ဘာမှ မရရှိခဲ့ပါ။ သူမ ကလေးတွေလည်း တကွဲး၊ တပြားစီ ဖြစ်နေကြသည်။ သူမရဲ့ခင်ပွန်းဟောင်းသည်လဲ နောက်အိမ်ထောင်နှင့် အိမ်ပေါ်မှာ ရောက်နေပါပြီ။
ထိုကိစ္စသည် သူမ၏ မောက်မာမှုကြောင့်လား၊ ခင်ပွန်း၏ အိမ်ထောင်ရေး ဖောက်ပြန်မှုကြောင့်လား၊ ဒါမှမဟုပ် ကိုယ်ရဲ့ စိတ်ခံစားချက်ကိုသာ ဦးစားပေးပြီး ရင်မှပေါက်ဖွားလာသော သား၊ သမီးတို့ နှင့် အိမ်ထောင်တစ်ခုကို လင်ရော မယားပါ နွေးထွေးလုံခြုံမှု ပေးဖို့မစဉ်းစားခဲ့ကြဘူးလား ။ . .. … . .. …။ သို့ လောပေါင်းများစွာနှင့် အိမ်ထောင်ရေး သင်္ခန်းစာတစ်ခုကို ဆုံးဖြတ်ချက် မချနိုင်ခဲ့ပါဘူး။
အိမ်ထောင်ပြုတာ မတူတဲ့ သဘာဝနှစ်ခု၊ ပတ်ဝန်းကျင် နှစ်ခု ကို တစ်ခုထည်းဖြစ်အောင် ကြိုးစားရတာတော့ မှန်ပါတယ်။ အားလုံးမဟုပ်တာင် တော်တော်များများကို ကြိုးစာနိုင်ကြပြီး ဆိုမှ တစ်ဘဝတာ ခိုင်မြဲမှာလား မသိပါဘူးနော်။ ဟာသ ကာတွန်း တစ်ခုထဲကလို အဘိုးကြီးနှင့် အဘွားကြီးနှစ် ယောက်က တရားရုံးတစ်ခုမှာ အသက် ၁၀၀ ကျော်မှ လာကွာရှင်းတာကို တရားသူကြီးက ဘာလို ခုမှလာကွာရှင်းရတာလဲလို့ မေးတော့ အဘွားကြီးက သား၊ သမီးတွေ သေအောင်စောင့်နေရလို့ လို ဖြေတဲ့ အကြောင်းရာလေးလိုများ ဖြစ်ရင်တော့ ကောင်းသားပေါ့။
Posted by စော(အဝါရောင်မြေ) at 1:23 AM
အင်း ဘဝ ၊ ဘဝ တွေထဲမှာမှ လူဘဝ၊ လူဘဝထဲမှာမှ မိန်းမ ဘဝ လို့စဉ်းစား ဆင်ခြင်မိပါတော့တယ်။ မယူခင်တုံးကတော့ မိန်းခလေးတွေကို နည်းမျိုးစုံသုံးပြီး ပိုးပါတယ်။
ဒီမနက်လေးတင် သူငယ်ချင်းကပို့ လာသော Forward mail ကနေ မိန်းခလေးများရဲ့ ရာဂစိတ်ကို နိုးထအောင်လုပ်ထားသော ကော်ဖီမုန့်အကြောင်း Website နှင့် တကွပို့ လာတာဖတ်ရပါတယ်။
ကာမစိတ်ကို နှိုးဆွနိူင်သော ကော်ဖီမစ်များ ဈေးကွက်အတွင်း တရားမ၀င်လမ်းကြောင်းများမှတစ်ဆင့် တွင်ကျယ်စွာတင်သွင်းရောင်းချနေခြင်းကြောင့် လူငယ်များ အကြားအသုံးချမှု မှားယွင်းကာမလိုလားအပ်သော လူမှုရေးပြဿနာများဖြစ်လာနိူင်စရာရှိကြောင်း၊ ယင်းကဲ့သို့ဖြစ်လာနိူင်သည့် အခြေအနေများကိုတွေးဆ၍ မိဘများနှင့်ဆရာ၊ ဆရာမတချို့မှလည်း စိုးရိမ်ပူပန်လျက်ရှိကြောင်းသိရသည်။
ထိုကော်ဖီကို လူငယ်ယောင်္ကျားလေးများ အများဆုံးဝယ်ယူကြကြောင်းတွေရှိရသည်။ူ
ကော်ဖီဧ။် ဈေးနှုန်းမှာလည်း အများဝယ်ယူသုံးစွဲ နိူင်သော အနေအထားဖြစ်နေခြင်းကြောင့် လူငယ်အမျိုးသားများ ၀ယ်ယူမှုနှုန်းများလာကြောင်းသိရသည်။
ကဲဒီလောက်ဆို ပျိုမေတွေရော၊ ကိုကိုတွေရော ဗဟုသုတအနေနဲ့တော့တော်တော်သိသွားပြီထင်ပါတယ်
အားလုံးကို အစ်မ၊ ညီမတွေလိုသဘောထားလို့ပြောပြလိုက်တာပါ။
အပေါ်ပုံက ယောင်္ကျားလေးတွေ အတွက်ပါတဲ့။
အောက်ကပုံကတော့ အမျိုးသမီးလေးတွေ အတွက်ပါ။
ဒါမျိုးတွေ အရင်ကလည်း နည်းမျိုးစုံးနှင့် ပုံစံမျိုးစုံ ပေါ်ပေါက်ခဲ့ဘူးလောက်ပါသည်။ ခုလည်းပဲ အလွန်းလွယ်လွန်းလို့လူငယ် လေးတွေ၊ မိန်းမငယ်လေးတွေ သတိထားမိစေရန် ရည်ရွယ်ပြီ Forward Mail မှ ရသော စာကို ပြန်လည် မျှဝေလိုက်ပါတယ်။
Posted by စော(အဝါရောင်မြေ) at 10:16 PM
ကာတွန်းဆွဲးတဲ့ ဆရာအော်ပီကျယ်ရဲ့`သူမနှင့် သူ' - အဆက်
ဆရာရဲ့သူနှင့် သူမ ကာတွန်းလေး ဆက်တင်ပေးပါမယ်။ လူတွေ အားလုံး ထိတ်လန့်စိတ်မကောင်းဖြစ်နေပေမယ့် လူဆိုတာ စိတ်ညစ်စရာ၊ စိတ်မကောင်းစရာထဲမှာ ကြာရှည်နေရင် မကောင်းပါဘူး။
စိတ်ဖြေလျှော့ကြရအောင်ပါနော် ။ နောက်ဆက်တွဲး ကာတွန်းလေးတွေ ဖတ်လိုက်ကြရအောင်နော်။
၅။ စာဖတ်တဲ့ နေရာမှာလဲ သဘောထားကွဲးလွဲးကြောင်းကို ဆရာက ဘယ်လို တွေ့ ရှိထားပြန်ပါသလဲ လို့လေ။
၆။ ဆရာက သူမြင်ရတဲ့ သွားလာ၊ နေထိုင်မူ မတူတာလေးကိုလဲ ဒီလို သရုတ်ဖော်ထားတာက ရီစရာလေး။
၇။ မှတ်မိတာခြင်း ပြိုင်ရင် ဘယ်သူနိုင် မလဲတဲ့။
၈။ နားသောတဆင်ရာ မှာလဲ ဒီလို ဒီလို ရှိ၏။ :P
၉။ ဒါကတော့ ကမ္ဘာမြေကြီးရဲ့စွဲးအားနှင့် အပြိုင် သူ နှင့် သူမတို့ အပြိုင် ဆွဲဆောင်ခြင်းပါတဲ့။
ကျမလေးစားရပါသော ဆရာ အော်ပီကျယ်ရဲ့ကာတွန်းလေးတွေကို ဖတ်ရှုရင်း ရယ်မော နိုင်ကြပါစေလို့ ။
Posted by စော(အဝါရောင်မြေ) at 12:41 AM
ကျမနှစ်သက်သော ဆရာနန္ဒသိန်းဇံ စာအုပ်ကလေး အကြောင်း
ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်သတ္တပါတ်က အွန်လိုင်းစာကြည့်ခန်းက နေ စာအုပ်ကောင်းလေး တစ်အုပ်ကို ဖတ်ကြည့် မိရင်းက ကိုယ့်လိုပဲ နှစ်သက်ကြရင် ဖတ်ကြည့်စေလိုတဲ့ စေတနာလေးနဲ့ ကြိုးစားပြီး နှစ်သက်ရာလေးတွေကို ဆရာ့ပြောပြထားတဲ့ အတိုင်း ရိုက်ပြီး တင်ပေးခြင်ပါတယ်။ သူငယ်ချင်းကောင်း၊ မိတ်ဆွေကောင်းဆိုတာ ကိုမှာ ကောင်းတာလေး ရှိရင် မျှဝေခြင်တတ်တဲ့ ဆန္ဒလေး ရှိတတ်တဲ့ အတိုင်းပေါ့နော် ။
ငှက်လေး တစ်ကောင်ဟာ အစာရှာဘို့ ပျံသန်းလာတယ်။ ဒီလို ပျံသန်းလာရင်း အတောင်တွေက ညောင်းလာတော့ "လေမရှိရင် သိပ်ကောင်းမှာပဲ။ ခုတော့ လေရှိနေလို့ငါမှာ ပျံလိုက်ရတာ အတောင်တွေကို ညောင်းနေတာဘဲ " လို့ညည်းညူလိုက်မိတယ် . . .။ ဒီလိုညည်းညူလိုက်တာကို လေက ကြားသွားတယ်။ ဒီတော့ လေက ငှက်ကလေးကို " ငှက်ကလေးရာယ်၊ စဉ်းစားပါဦးကွယ် လေရှိနေလို့ သာ သင်ဟာ လိုရာကို အစာရှာသွားနိုင်တယ်။ အချိန်မှီ အိပ်တန်းကို ရောက်အောင်လဲ ပျံနိုင်ပြီး အိပ်စက်နားနေနိုင်တာ မဟုပ်လား" လို့ ပြောတယ် . . .။
ဒီတော့မှ ငှက်ကလေးဟာ သဘောပေါက်သွားပြီး " အသင်လေကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဘယ်တော့မှ သင့်ရဲ့ ကျေးဇူးကို မမေ့ပါဘူး" လို့ ပြောပြီး ဆက်လက်ပျံသန်းသွားတယ်။
မိတ်ကောင်း ဆွေကောင်းဆိုတာ မိမိကို အင်မတန်ပေးနိုင် ခက်တဲ့ အရာကို ပေးတတ်တယ်။ အင်မတန် ပြုနိုင်ခက်တဲ့ အမူမျိုး၊ အကူအညီမျိုးကို လုပ်ဆောင်ပေးတတ်တယ်။ .. .. ..
.. .. .. အန္တရာယ်တွေနှင့် ကြုံတွေ့ လာတဲ့အခါမှာလဲ မိမိကို စွန့် ပစ် ကျောခိုင်းမသွားဘူး။ . . . အကြောင်းမသင့်လို့မိမိမှာ ပစ္စည်းဥစ္စာ ဆင်းရဲသွားတဲ့ အခါမျိုး၊ အဆင့်အတန်း လျှောဆင်းနိမ့်ကျသွားတဲ့ အခါမျိုးမှာလဲ မိမိကို မထီမဲ့မြင် မပြုဘူး။ အထင်သေးတဲ့ အပြောမျိုးနှင့် မပြောဘူး။ အထင်သေးတဲ့ အကြည့်မျိုးနဲ့မကြည့်တတ်ဘူး။
.. .. .. . . . .. .. .. . . .
" အောင်မြင်ခြင်းမှာ မိတ်ဆွေတွေ အများကြီးရှိတယ်" ...
" ချမ်းသာတဲ့ သူဟာ မိမိကို တဖက်သားက တကယ်စစ်မှန်တဲ့ မေတ္တာနဲ့ ချစ်တယ်၊မချစ်ဘူး ဆိုတာကို အမှန်မသိနိုင်ဘူး။
လှည့်စားသည်ကို လှည့်စားသည်ဟူသိ၍ လှည့်စားခြင်းမှ လွတ်မြောက်ခြင်း . . - -
.. .. .. :D
လူငယ်တို့ သည် ငိုကြွေးခြင်းဟူသော အားရှိကုန်၏။ မိန်းမတို့ သည် အမျက်ထွက်ခြင်းဟူသော အားရှိကုန်၏။ ခိုးသူတို့ သည် လက်နက်ဟူသော အားရှိကုန်၏။ မင်းတို့ သည် အစိုးရခြင်း အာဏာဟူသော အားရှိကုန်၏။ ပညာရှိတို့ သည် အကျိုးရှိ၊ မရှိကို ရှုမြင်ခြင်းဟူသော အားရှိကုန်၏။ သာမဏ၊ ဗြဟ္မဏ တို့ သည် သည်းခံခြင်းဟူသော အားရှိကုန်၏။ လူမိုက်တို့ သည် ပြစ်တင် ကဲ့ရဲ့ခြင်းဟူသော အားရှိကုန်၏။
လောကမှာ ပြစ်တင် ကဲ့ရဲ့ လွတ်တဲ့သူရာယ်လို့မရှိနိုင်ပါဘူး။ ဟိုတုံးကလဲ မရှိခဲ့ဘူး။ ခုလဲ မရှိဘူး၊ နောင်လဲ ရှိမှာ မဟုတ်ဘူးတဲ့။ အပြစ်တင်ချင်သူကတော့ ကြံဖန်ပြီး အပြစ်တင် ကဲ့ရဲ့မှာပါပဲ။ ကိုယ်မှားနေရင် ဘယ်လို မှားနေတယ်၊ ဘယ်လို ပြင်သင့်တယ် ဆိုတာကို ထောက်ပြတတ်တဲ့ မိတ်ဆွေကောင်းမျိုးဆိုတာ ရှားပါတယ်။
ကိုက ကောင်းတာ မှန်တာကို လုပ်ကိုင် ဆောင်ရွက် ကြိုးစားနေပါလျက်နဲ့ပြစ်တင်ကဲ့ရဲ့ ရှုတ်ချလာရင်တော့လဲ မိုက်မဲသူတွေရဲ့ ကဲ့ရဲ့ခြင်း၊ ချီမွမ်းခြင်း ဟာပဓာန မဟုတ်ပါဘူး ဆိုတဲ့ ဗုဒ္ဓရဲ့စကားအတိုင်း ဂရုစိုက်မနေဘဲ ကိုယ့်အလုပ် ကိုယ်ဆက်လုပ်ဖို့ ပါပဲ။ . . .
လူ လူခြင်း ဆက်ဆံတဲ့ အခါ၊ တဖက်သားကို ကူညီတဲ့ အခါမှာ ဗဟုသုတ အတွေ့ အကြုံနည်းနေလို့ပညာ အမျှော်အမြင် လိုနေလို့ငါ့ရဲ့ ကူညီမှု ဆကဆံရိုင်းပင်းမှုဟာ ချွတ်ချော်တဲ့အတွက် ကိုယ့်ကို တစ်ဖက်လူက အထင်မှား အမြင်မှား ဖြစ်ပြီး ငါ့ကို မဖွယ်မရာ တုံ့ ပြန်လေရော့လား လို့ လဲ ဆင်ခြင်ရမယ်တဲ့။
ကိုယ်က မိတ်ဆွေကောင်းတို့ ရဲ့ ဂုဏ်အင်္ဂါနဲ့ ညီအောင် အတတ်နိုင်ဆုံး ဆက်ဆံပြုမူပေမယ့် တစ်ဖက်လူတွေက ကောင်းမွန်စွာ မတုံ့ ပြန်ရုံမက ကိုယ့်အကျိုးကို ပျက်စီးအောင် လုပ်လာတယ်ဆိုရင်လဲ အားငယ် စိတ်ပျက်စရာတော့ မလိုပါဘူး။ ဒီလို လူမျိုးတွေကို ရှောင်သင့်ကရှောင်၊ ဖယ်သင့်က ဖယ်ပြီး ကျွန်တော်တို့ ရဲ့ စေတနာ၊ ပညာ၊ ဝီရိယတွေ ကိုပဲ မိတ်ဆွေကောင်းအဖြစ်၊ အဖော်မွန်အဖြစ် ပေါင်းသင်းဆက်ဆံပြီး ဘဝခရီးကို တည်ငြိမ်စွာနဲ့ကိုယ်ရည်မှန်းထားတဲ့ ပန်းတိုင်ရောက်သည်အထိ လျှောက်လှမ်းသင့်တယ်လို့. . . . .
ဒါတွေက ကျမကြိုက်တဲ့ စာသားတွေ ထုတ်နုတ်ထားတာပါ။ အမှန်ကတော့ ကျမက အကုန်လုံးကြိုက်ပါတယ်။ အကုန်လုံးလဲ မရိုက်နိုင်ပါဘူး၊ ပြီးတော့လဲ ဆရာ့စာအုပ်လေးကို သွားဖတ်ကြည့်စေခြင်တာရှင့် ။ :P
အစ အဆုံး ဖတ်ကြည့်ဖို့ တိုက်တွန်းပါတယ်။ အောက်ကပေးထာတဲ့ လင့်ကလေးကနေပြီး ဖတ်ဖြစ်အောင်ဖတ်ဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်နော်။ ဆရာက နံမည် ကျော်ပြီးသားပါ၊ ကျော်ညာပေးဖို့ မလိုပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ကိုယ်ဖတ်ရတာကို သူများတွေလဲ ဖတ်ဖြစ်အောင်လို့တိုက်တွန်းတာပါနော်။ စာမျက်နှာ ၄၉ မျက်နှာပဲ ရှိပါတယ်။ ဖတ်ရတာ ဘယ်လိုလဲဆိုတာ သိစေခြင်လို့ ပါ။
Posted by စော(အဝါရောင်မြေ) at 8:06 PM
ကာတွန်းဆွဲးတဲ့ ဆရာအော်ပီကျယ်ရဲ့`သူမနှင့် သူ'
ဆရာရဲ့ကာတွန်းကို ပြီးခဲ့တဲ့ နှစ် နှစ်လောက်က အီမေးလ်ကနေ ရရှိထားတာ ကြာပါပြီ။ အလကားရတဲ့ အီမေးလ်က နေရာလွတ်နည်းနေလို့စာတွေပြန်ကြည့်ပြီ ပြန်ဖျက်ရင်ကနေ တွေ့ ပြီ ဆရာ့ ရဲ့ကာတွန်းကို သိမ်းလဲထားခြင်၊ သူများတွေလဲ ဝေငှခြင် စိတ်ပေါ်လာတာမို့ဒီနေရာလေးမှာ တင်မယ်လို့ စိတ်ကူးမိပါတယ်။ ဆရာကိုလဲ ဒီမှာ ဖော်ပြခွင့်ကို ဘလော့ထဲကပဲ ခွင့်တောင်း ပါရစေနော်။
(တကယ်လို့ခွင့်မပြုဘူးလို့သိခဲ့ရရင်တော့ ကျမ memory drive ထည်းကို ပြောင်းသိမ်းလိုက်ပြီ ပြန်ဖျက်ပေးပါမယ် .. .. ..)
၁။ ဗေဒင်နှင့် လူ့ အတွေးကို ဆရာက ခွဲးခြားဖော်ပြထားတာပါ။
၂။ သူ နှင့် သူမတို့စိတ်ဝင်စားမှုနှင့် ပြောဆိုခြင်းပါတဲ့။ ဒီနေရာမှာတော့ ကျမလဲ ဆရာကို ခြွင်းချက်မရှိ ထောက်ခံကြောင်း အဆိုပြုပါတယ်ရှင့် .. .. .. :D ။
၃။ ခရီးသွားခြင်နှင့် ပတ်သတ်ပါတယ်။ ဖြစ်လေ့ရှိတယ် တကယ်လဲ ဟုတ်တယ်နော်။
၄။ ဆရာက မြင်လဲ မြင်တတ်တယ်ရှင့်။
ကျန်တဲ့ အပိုင်းများကို ပြီးမှပဲ ဆက်တင်ပေးပါမယ်။ အကြိမ်ကြိမ် ဖတ်ပြီ၊ အကြိမ်ကြိမ် ရယ်ရအောင်လို့ ပါ။ နေ့ စဉ် ထိတွေ့ ဆက်ဆံရတဲ့ လူမူဘဝကနေ ခဏလေးပဲ ဖြစ်ဖြစ် ရယ်မောခြင်းနှင့် စိတ်တွေ ပြေလျှော့နိုင်အောင် စေတနာဖြင့် ဆရာ့ကာတွန်း အမြင် သရုတ်ဖော်မူ့ လေးကို ဒီမှာ ခဏရပ်ထားပါမယ်ရှင်။
Posted by စော(အဝါရောင်မြေ) at 6:51 PM
အလွှမ်းပြေ ရွှေစက်တော်ဘုရားနှင့် ပွဲးတော်
ဒါကတော့ ၂၀၁၁ခုမှာ ဖွင့်လှစ်သော အကြိုမုတ်ဦးပါ။
စာမေးပွဲးလဲ မပြီးသေးလို့လူရှင်းပါတယ်။ ရေလဲမညစ်ပတ်သေးသလို ရေလဲသိပ်မများပါဘူး။
လမ်းတွေကတော့ ကတ္တရာပြီးသလောက်မို့သွားရတာ အဆင်ပြေသွားပါပြီ။ ဒါပေမယ့် ရွှေစက်တော်မှာ ဘာမှ အလကားမရဘူးတ။ဲ့ လမ်းကြေးတွေ နေရာအနှံ(မြို့ အဝင်၊ အထွက်)ကောက်ခံလွန်းလို့ ပါ။
အောက်စက်တော်ရာကို ဒီနှစ်မြင်ရတဲ့ မြင်ကွင်းပါ။
တဲချောင်းတွေကတော့ ဂေါပဃကပေးတဲ့ ပုံစံအတိုင်း ဆောက်ရပါတယ်တဲ့။
အခန်းခတွေကလည်း မသေးပါဘူ။ တဲချောင်းပိုင်ရှင်တွေကလည်း ညည်းလိုက်ပါသေးတယ်။
အထက်စက်တော်ရာကို အောက်ကနေ ဖူးမျှော်ရပုံပါ။ မြေကာနံရံကို ထုံးသုတ်ပြီးသွားပြီ။
အဲဒီမှာလဲ မျောက်တွေရှိတယ်။ နေကြာစိတွေ၊ ခရမ်းချည်သီးတွေ စားကြတယ်။ အပေါ်မှာတင်လည်း ဈေးဆိုင်တွေက ဝယ်ကျွေးလို့ ရတယ်။
အထက်စက်တော်ရာကို လူတဦးက ငုံပြီး စေတီ တည်ခဲ့လို့မျက်ဝါးထင်ထင် မဖူးနိုင်တော့ပါဘူး။ သူတစ်ပါး မမြင်စေလိုသော စေတနာရှိလို့ လား တော့ မသိပါ စေတီတည်သူမှာ စေတီတည်အပြီးမှာ မျက်စိအလင်း ကွယ်သွားတယ်လို့လူကြီးတွေပြောပြတာ မှတ်သားရဘူးပါတယ်။
ဘုရားရဲ့ စက်တော်ရာ အစစ်ပုံတူ သွန်းထားတဲ့ ပုံပါ။ အောက်စက်တော်ရာက ခြေတော်ရာ အစစ်ကိုလဲ ရွှေချထားတာ ပိန်ပိတ်နေပါတယ်။ မြန်မာလူမျိုးများ ကိုးကွယ်တာကတော တကယ်ပါပဲရှင်။
မိုးလရာသီမှာ ဘုရားပွဲတော်ပိတ်လေ့ရှိပါတယ်။ ချောင်ရေကျလို့ရေဖုံးလွှမ်းနိုင်တာကြောင့် ပွဲးတော်ပိတ်ရက်မှာတော့ သံဆလောင်းကြီးနှင့် သေခြာ သော့ခောတ် ပိတ်ထားလေ့ရှိပါတယ်။
သစ်တောက ပြသထားတဲ့ သမင်ဖိုနှင့်၊ သမင်မလေးတွေပါ။ သစ်တောဝန်ထမ်းကလည်း သူရောင်းတဲ့ အရွက်မှ ကျွေးရမယ်တဲ့ အပြင်စာ သွားကျွေးတော့ သူ့ ကို လူကြီးကပြောတော့မှာပဲနဲ့။ သူရောင်းတာက သေးသေးလေး။ ဒီလိုလဲ စီပွှားရှာပါတယ်။
တောင်ပေါ်ကနေ မြင်ရတဲ့ အတွင်းဘက်က တဲတန်းလေးတွေပါ။ ဖွင့်ခါစမို လူနည်းနေတာပါ။
တကယ် လူစည်းတဲ့ အချိန်ရောက်ရင် ကားတွေ၊ လူတွေ၊ စမ်းချောင်းထဲမှာ ရေချိုးတဲ့သူတွေနဲ့ အလွန်ရှုတ်ပါတယ်။ လူတွေစည်းကမ်းမရှိပစ်ထားတဲ့ အမှိုတ်တွေကလည်း စမ်းရေထဲရော အနှံပေါ့။
ဒီနှစ်တော့ အမှိုက်တောင်းထားတာတွေ့ ရပါတယ်။
အမှိုတ်လဲ တစ်နေ့တစ်ခါသိမ်းတာ တွေ့ ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တချို့ က အလွယ်ပစ်ချင်တုံးပါပဲ။
ဘုရားမှာ အာရုံဆွမ်းနှင့် နေ့ ဆွမ်းကပ်လှူကြသလို၊ ရွှေစက်တော်ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ဘုရားဖူးကြွလာသော သံဃာတော်များကို တန်းဆွမ်းများ နံနက်နှင့် နေ့ လယ် တစ်နေ့နှစ်ကြိမ် လောင်းလှူပူဇော်နိုင်ရန် စီစဉ်ထားရှိတာကို ကြည်ညိုစွာ ဖူးတွေ့ ခဲ့ရပါတယ်။
ဆွမ်းများကိုတော့ ကိုယ်တိုင် မချက်နိုင်ပါက ညကတည်းက ထမင်းဆိုင်များမှာ မှာယူပူဇော် လှူဒါန်းနိုင်ပါတယ်ရှင်။ တချို့ လည်း အိုး၊ ခွက်တွေပါ သယ်လာပြီး ချက်ကြတာကိုလည်း တွေ့ ရပါတယ်။ အလှူဒါန်းန ပြုလို့ သူများအတွက် ကြိုတင် ပြင်ဆင်နိုင်ရန် အကြိုးမျှော်နိုးဆော်လိုက်ရပါသည်။ (မနေ့က တင်ရန် ကျန်ခဲ့ပါသဖြင့် ထပ်မံ ဖြည့်စွတ်ထားပါတယ်)
Posted by စော(အဝါရောင်မြေ) at 1:45 AM